जापान मा जनवरी! जापानको जाडोको उत्तम आनन्द लिनुहोस्! - Best of Japan
वाकाकुसा यामायाकी वार्षिक उत्सव हो जुन हरेक वर्ष जनवरीको अन्त्यमा नारा शहरमा सम्पन्न हुन्छन्। वाकाकुसा नारा पार्क नजिकैको पहाड हो। = एडोब स्टक
जनवरीको सुरूमा धेरै जापानी मानिसहरु नयाँ वर्षको बिदा लिन्छन्। यस समयमा मन्दिर र मन्दिरहरू भीडभाड छन्, त्यसैले कृपया सावधान रहनुहोस्। जनवरीमा, होक्काइडोमा मात्र होइन तर जापानको सागर छेउ होन्शू र हिमाली क्षेत्रहरूमा पनि हिउँ पर्न थाल्छ। यदि तपाईं त्यस्तो क्षेत्रमा जानुहुन्छ, तपाईं जापानको हिउँ प्रकृतिबाट आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। जनवरीको उत्तरार्द्ध पछि, केही मन्दिरहरू र मन्दिरहरूमा सामान्य हिउँदको चाड हुन्छ। तिनीहरू आफैंमा उपस्थित हुन पनि सिफारिस गरिन्छ।
टोक्यो, ओसाका, होक्काइडो जनवरीमा जानकारी
जनवरी र मन्दिरको मन्दिरहरू र भीडहरू जनवरीको शुरुमा अत्यन्तै भीडले भरिन्छन्
वास्तविक हिम दृश्यको लागि जानुहोस्
प्रतिनिधित्व जाडो समारोहहरु जनवरी मा आयोजित गर्नु पर्छ
यदि तपाईं जनवरीमा टोकियो, ओसाका वा होक्काइडो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया तलका स्लाइडरमा थप जानकारीका लागि छवि क्लिक गर्नुहोस्।
जनवरीको सुरूमा, नयाँ वर्षका घटनाहरू हरेक वर्ष जापानमा आयोजित हुन्छन्। मानिसहरू प्रायः मन्दिर वा मन्दिरको भ्रमण गर्न प्रार्थना गर्दछन् जसले वर्षलाई राम्रोसँग बिताउन सक्दछन्।
यदि यस समयमा तपाईले जान चाहानु भएको मन्दिर वा मन्दिर ठूलो छ भने, तपाईले नयाँ बर्ष अवधिमा लाखौं मानिस आउने अपेक्षा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं एकैचोटि सबै भ्रमण गर्ने व्यक्तिको संख्यामा तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ।
यदि तपाईं भीड मान्नुहुन्न भने, तपाईं जापानी जनता मुख्य मन्दिर र मन्दिरहरूमा सुव्यवस्थित हिंड्न देख्न सक्नुहुन्छ।
जनवरीमा होक्काइडोमा जापान सागर छेउमा होन्शु र हिमाली क्षेत्रहरुमा हिउँ झर्दै बारम्बार बग्न थाल्छ। केही क्षेत्रमा हिउँ एक दिनमा धेरै मिटर जम्मा हुन सक्छ।
तपाईं स्की स्लोपमा स्कीइ and र स्नोबोर्डि of्ग गर्न सक्नुहुनेछ। यस बाहेक, तपाईं आफ्नो वरिपरि हिउँ परेको हेर्नका लागि खुला खुला स्नानगृहमा तातो स्प्रि .हरू रमाउन सक्नुहुन्छ।
यी हिउँ पर्ने ठाउँहरूको भ्रमणका लागि थप जानकारी राख्ने तल लेख छ।
चाडहरू हिउँदमा पनि विभिन्न स्थानहरूमा आयोजित गरिन्छ। प्रमुख चाडहरू फेब्रुअरीमा केन्द्रित हुन्छन्, तर धेरै चाडहरू जनवरीमा पनि आयोजित हुन्छन्। तिनीहरू मध्ये सब भन्दा प्रसिद्ध उत्सव यस पृष्ठको सुरूमा फोटोमा प्रस्तुत "वाकाकुसा याकीयाकी" हो।
"वाकाकुसा यामायाकी" त्यो पर्व हो जुन प्राचीन कालदेखि नै नारा शहरको वाकाकुसा पर्वत (itude (२ मिटर) मा सम्पन्न हुन्छ। आज, यो प्रत्येक वर्ष जनवरीको अन्तमा आयोजित गरिन्छ। यो चाडमा आतिशबाजीको प्रदर्शन पनि राखिएको छ।
ताल Shikotsu ब्लू महोत्सव, Hokkaido
जनवरीको अन्त्यमा, "लेक शिकोट्सु ब्लू फेस्टिवल" प्रत्येक वर्ष होकइडोको शिकोट्सु तालमा आयोजित हुन्छ। होक्काइडोमा जाडोको उत्सवको रूपमा, सप्पोरोमा हिउँ महोत्सव धेरै प्रख्यात छ, तर शिकोत्सु तालमा पनि यस चाड रमाइलो चाड पनि हो। तपाईंले होक्काइडोमा धेरै शीतकालीन भावना अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले म भ्रमणको सिफारिस गर्दछु।